British Petroleum:“HISY TETIKASA MARO HO AN’I MADAGASIKARA” -
AccueilRaharaham-pirenenaBritish Petroleum:“HISY TETIKASA MARO HO AN’I MADAGASIKARA”
19/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanatanteraka fitsidihana ara-pahalalam-pomba ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha, ny delegasion’ny orinasa British Petroleum (BP) misy an’i Jasper Peijs, Exploration filoha lefitra aty Afrika, sy Oskana Dembitska, Business Development Partener Eastern Hemisphere, ny alakamisy 15 Desambra teo.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’izy ireo tamin’ny filoham-pirenena fa maromaro ireo tetikasa eo amin’ny fanadiovana solika sy fitrandrahana ho an’i Madagasikara ataon’ny orinasa BP. Marihina mantsy fa miasa eo amin’ny fikarohana, sy fitrandrahana ary fanadiovana solika ity orinasa fahatelo maneran-tany eo amin’ny kaompanian-tsolika ity. Araka izany, efa nisy ny dinika nifanaovan’ny BP sy ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny teo amin’ny Office des Mines Nationales des Industries Stratégiques (OMNIS) amin’ny fiaraha-miasa azo atao. Raha ny marina mantsy, tsy vao izao ity orinasa ity no niasa sy niara-niasa tamin’i Madagasikara fa efa nisy taona maromaro.
Ankoatra izay, nifototra tamin’ny tombontsoa tokony ho azon’i Madagasikara amin’ny fanodinana, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny solika ary ireo tetikasa ho an’i Madagasikara ny dinika nifanaovan’ireo solontenan’ny orinasa BP sy ny filoham-pirenena.